somali Ilaahay ha naga badbaadiyo quruxda gaboobay! Waqti dheer ayuu ku nool yahay boqoradda sharaf leh! Ilaah badbaadiya boqoradda! U dir isaga guusha Mahad iyo ammaan Wakhti dheer inaga boqor noo ah Ilaah wuxuu badbaadiyaa boqoradda!
Mid ka mid ah mawaadiicda jinsiyada afar Blast aad iyo aad u badan Ilaah wuxuu badbaadiyaa dhulkeenna! Guriga geesiga ah oo bilaash ah Oo waxaad ku taagnaan doontaa badda bil cusub Kalkaaliyaha dhabta ah ee chivalry Ilaah wuxuu badbaadiyaa dhulkeenna!
Qolo badan oo tartan iyo dhalasho Laga soo bilaabo ugu sareeya ee dhulka Ilaahay na badbaadi! Joojinta khilaafka iyo joojinta nacaybka Rajada iyo farxadda qandaraaska ayaa kordha Fidinta nabadgelyada guud Ilaahay na badbaadi!
Ilaahay ha barakeeyo dalkiisa hooyo! Meel badbaadinta May Heav'n Weli ilaali xeebahayaga: Nabadgelyada ayeey korodhaa, Foornadu waxay u beddeshaa saaxiib, Xuquuqda Ingiriiska ayaa ku tiirsan Dagaalka mar dambe maahan.
Rabbiyow, boqortooyadeenow, barake Xoog iyo xaqnimo; Waqti dheer ayay xukumi kartaa: Qalbigeedu waa dhiirrigeliyaa oo guuraa Xigmadda xagga sare ka yimaada, Iyo jacayl qaran Carshigeeda ayaa sii wata
Noqo sharci iyo qawaaniin xaq ah Udireen sababaha dadweynaha, Oo barakadaydana waannu u duceeaynaa. Guriga geesi iyo xor, Waxaad tahay dal libaax, Waxaan ka baryaynaa in weli kuugu Kind Heav'n ayaa dhoola cadeyn kara.
Ma aha dalkan oo keliya, Laakiinse ha naxariisto Ilaaha naxariista leh Laga soo bilaabo xeebta ilaa xeebta: Sayidow, quruumuhu seef bay Nimanku waa inay walaalo yihiin, Oo samee hal qoys Dunida ballaaran
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=God_Save_the_Queen&oldid=174571"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 23 Juun 2018, marka ee eheed 14:27.